China Chinyakare Classic Brew Beer Mug Magirazi Fekitori uye Vagadziri | Chuancheng
Mason Jar Wedding Favours Apothecary Jars Nyuchi Hari B ...
Transparent Round Girazi Threaded Uchi Jar ne Tin Lid
Kutengesa kupisa kicheni chirongo kuseta chengetedza chikafu chengetedza bottl ...
Yekare Yekare Brew Beer Mug Magirazi
Kubika Oiri sosi girazi Mabhotoro ane anodurura spout uye ...
Olive Oiri uye Vhiniga Bhodhoro Set
Crystal Pipi Jar neLid, Yakajeka Girazi Chikafu Chengetedza ...
Iyi seti yeBeer Mugs inogadzirwa kubva kune yakasimba uye mhando yakakora girazi.
Iyo yakakora, inorema basa mabhodhoro uye inobata inoramba kupuruzira kune mashoma apererwa. Zorora pamberi peterevhizheni kana kumabiko neshamwari uine imwe yeaya mags mune yako ruoko.
Yakatsetseka yeGermany doro mug mug inoita kuti doro rinyoro ichitonhora uye nekunhuhwirira kwekunhuhwirira uye kwekunhuhwirira kweasile uye ma lager.
Yakaringana zvine huremo nehuremu hwakadzika kuti dzidzivirire kupaza uye kupera, zvine hunyanzvi hwokugadzira hwakareruka kubata uye hwakasimba zvakakwana kupindwa nechando mufiriji - idzi mugs dzinochengetera chinwiwa chako kuchitonhora kusvika pakupedzisira swig.
Hukuru Bheji regirazi - Iyo yemazuva ano inopotera pane yakasarudzika chiGerman-chimiro stein iyo inowedzera kuwedzera kusagadzikana uye dapper maitiro kune yako doro yekunwa ruzivo zvakare yakakodzera kofi, tii uye zvimwe zvinwiwa.
Zvimiro - Iyo tangi yegirazi 'hombe mubato unoita kuti igadzikane kubata iyo mug uye inakidze zvinwiwa kwenguva yakareba yenguva; yayo yakakura 17.25-ounce kukwanisa kunoita kuti iwe unakidzwe newaini yakawanda yewaini panguva imwe; iyo inorema pasi inowedzera kugadzikana uye inodakadza kunzwa kune Stein.
Italian Mhando yegirazi - Yakagadzirirwa muItari natenzi girazi blowers vakazvitsaurira pachavo pakugadzira yakakwirira-mhando, inotungamira-isina, yakasimba girazi reunganidzwa; aya matangi anoisa zasi rakashongedzwa nemhando dzakatemwa magirazi dzakatemwa.
Kurongeka uye Kusarudzika Kushandisa - Doro redu doro rakakwana kuti rishandise nguva dzese; kunyangwe iri pachechi yekubheka inoona Svondo nhabvu mutambo kana fancier yekudya kwemanheru pati, idzi mugs mesh zvakanaka pane chero chiitiko.
Kutarisira Mirayiridzo - Magirazi edu anorema pabasa anoshambidzwa nyore-nyore uye anogezeswa musheji isina kukuvara, yekukuvara-isina rinoshamba, geza, uye yakaoma masekete.
Yepfuura: Rakadzika Girazi Sports Beer Mugs
Inotevera: Beer Glass
Carlsberg Beer Inogona
Carlsberg Beer Girazi
Bhodhoro Chemanje Beer
Swing Pamusoro Beer Bhodhoro
Yakasarudzika Beer Glass
Jumbo Thick Girazi Sports Beer Mugs
Rakadzika Girazi Sports Beer Mugs